လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဒို့ရန်သူတဲ့??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဒို့ရန်သူတဲ့???
Posted by Don Juan Ronald on Oct 1, 2011 in Copy/Paste |6comments
၈လေးလုံးအပြီး “ ပိ ပြား ”အစိုးရတက်လာတဲ့အခါဆိုင်းပုဒ်တွေအများဆိုက်ထူ slogan သောင်းခြောက်ထောင်နှင့်တန်ဆာဆင်ထားလျက်ပေါ့၊အဲဒီထဲမှာအထူးခြားဆုံးကတော့ လ ၀ က ရုံးရှေ့တွင်စာလုံးအကြီးကြီးနှင့် “ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဒို့ရန်သူ ” ဆိုင်းပုဒ်ကြီးပါဘဲ။
“ လ္ဘက်ရည်ဖိုး ”ဆိုသည်မှာကုလားတွေစီကလာတာဖြစ်ကြောင်း၊ဟိုတလော net ပေါ်မှာတွေ့လိုက်သည်၊အကယ်၍မှန်ခဲ့မည်ဆိုရင် it must be very very funny matter ဘဲ၊ကုလားတွေဖေါ်စပ်လိုက်တဲ့အဲဒီ “ လ္ဘက်ရည်ဖိုး ” ဆေးကြီးကို တရုတ်တွေကယူပြီးဗမာတွေကိုကြွေးလိုက်တော့အရမ်းအစွမ်းထက်ပြီးအကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းလာနိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်၊တရုတ်တွေကစစချင်းတော့ရပ်တည်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဤဆေးကိုသုံး၏အောင်မြင်သည်၊နောက်တဆင့်တက်၍စီးပွားရေးအတွက်သုံး၏အောင်မြင်သည်၊နောက်တဆင့်တက်၍ လောဘ အတွက်သုံး၏အောင်မြင်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာလာဘ်ပေးလာဘ်ယူအလုပ်တတ်ဆုံးလူမျိုးများထဲတွင် ကျနော်တို့တရုတ်တွေကထိပ်မှာရှိတယ်၊အဲဒီတော့ကုလားတွေထွင်ထားတဲ့ လ္ဘက်ရေဖိုးရဲ့ယူနစ်သည့် one tea , two teas, many teas,to ……..infinity teas ကိုတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာမသောက်ခြင်တော့ဘူး၊တရုတ်ဟန်ပါသောယူနစ်ဖြစ်တဲ့ one table, two tables, many tables to……… infinty tables ကိုတော့ hotel တွေမှာစားကြဟဲကြမယ်ကွယ်၊၁၉၈၀ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပိုင်း one table ပြောင်းသုံးလာသည်၊ ကြာတော့ table တွေများသသည်ထက်များလာပြီး ၁၉၈၈ခုနှစ်၈လ၈ရက်နေ့အာဏာရှင်တွေဒူးတုံသွားလောက်အောင်ပေါက်ကွဲသွားတော့သည်။
စိတ်မရှိနဲ့နော၊်ဟိုမကောင်းတဲ့ထိုတရုတ်ယုတ်တွေနှင့်ဗမာပုတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးရေးတာ၊ကိုလ်ကအဲလိုမျိုးမလုပ်ဘူးဘူးဆိုရင်၊အဲဒီလိုလုပ်ဘူးတဲ့ကောင်၊ယခုထိလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဖော်ထုပ်ရမယ်၊တိုင်တန်းရမယ်၊ကဲ့ရဲ့ရမယ်။ရွာသားများအားလုံးယခုချိန်မှစ၍တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်၊တမျိုးသားကောင်းစားရေးအတွက်တဖက်တလှမ်းမှ slogan များများနဲ့ အကောင်အထည်ပေါ်အောင်လုပ်ဆောင်ကျပါဆို့။
ဟေ~ ငါ လ ၀ က ကိုပြောရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်၊အဲဒီ “ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူဒို့ရန်သူ ” ဆိုင်းပုဒ်ကြီးကို လ ၀ က ရုံးရှေစိုက်ထားလို့လာဘ်တောင်းခြင်းနည်းသွားသလား ? မနဲသွားပါ၊ လ ၀ က ၀န်ထမ်းကဆိုင်းပုဒ်ကြီးရဲ့အောက်မှာသာမလုပ်ရတာပါ၊ရုံးထဲမှာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့၊ကျနော်ကြားသွားသည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးရောက်တော့ “ ဟေ့~~လောပန်း(၀ါ)ထောင်ကဲရေ~~နှစ့်သစ်ကူး၊ဘာကြွေးမှာလည်း?” လူမှုရေးအရသော်၎င်း၊ခင်မင်မှုအရသော်၎င်း၊စီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊ကြီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊တခုခုတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရ၏။
သင်္ကြန်ရောက်တော့ “ ဟေ့~~လောပန်း(၀ါ)ထောင်ကဲရေ~~သင်္ကြန်ရောက်ပြီဘာကြွေးမှာလည်း?” လူမှုရေးအရသော်၎င်း၊ခင်မင်မှုအရသော်၎င်း၊စီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊ကြီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊တခုခုတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရ၏။
တန်ဆောင်တိုင်ရောက်တော့ “ ဟေ့~~လောပန်း(၀ါ)ထောင်ကဲရေ~~တန်ဆောင်တိုင်ရောက်ပြီဘာကြွေးမှာလည်း?” လူမှုရေးအရသော်၎င်း၊ခင်မင်မှုအရသော်၎င်း၊စီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊ကြီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊တခုခုတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရ၏။
တရုတ်လမုန့်ပွဲရောက်တော့ “ ဟေ့~~လောပန်း(၀ါ)ထောင်ကဲရေ~~လမုန့်ပွဲရောက်ပြီဘာကြွေးမှာလည်း?” လူမှုရေးအရသော်၎င်း၊ခင်မင်မှုအရသော်၎င်း၊စီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊ကြီးပွားရေးအတွက်သော်၎င်း၊တခုခုတော့စီစဉ်ပေးလိုက်ရ၏။
ကြာလာတော့ဗမာတွေကတရုတ်လိုထမင်းစားရင်တူတွေသုံး၊စကားပြောရင်လည်း ၀ တို့လုတို့သုံး၊မီနီစကတ်တွေဝတ်၊ဖင်ပေါ်၊ကြိုင်းပေါ်၊ကျောပေါ်အင်္ကျီဝတ်စသဖြင့်ပေါ့။
ကျနော်စေတနာအပြည့်နှင့်အကြံပေးခြင်တာကတော့ စင်ကာပူ ကနေ ကြိမ်ဒါဏ်ကိုမှာယူလိုက်၊အဲဒီတရုတ်ယုတ်နဲ့ဗမာပုတ်တွေကိုဆော်ပေးလိုက်( ကျနော်ကြားဘူးတာကတော့တခါဆော်ခံရဘူးရင်တသက်လုံးမလုပ်ရဲတော့ဘူး၊ဟုတ်လားမသိဘူး)တခါတည်းမှတ်သွားအောင်။ကံကောင်းလို့ကျနော်ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ရင်လည်းကြိမ်ဒါဏ်မိအုံးမယ်။
မဆလခေတ်နှောင်းအချိန်မှာကျနော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရုံးမှာအိမ်ဖုံး(telephone)အလုံး၂၀ရောက်လာသည်၊တလုံးကိုလေးသိန်းခွဲနှင့်မဲနှိုက်ခွဲဝေရန်လျှောက်လွှာခေါ်ဖို့ပြည်နယ်ကောင်စီအတွင်ရေးမှူးကိုလ်တိုင်တာဝန်ယူသည်၊သိကြတဲ့အတိုင်းကုလားနှင့်တရုတ်တွေအလျှောက်များသည်၊ကုလားအချို့ကသူတို့တလုံးကိုငါးသိန်းပေးမည်၊သူတို့ကိုဘဲချပေးပါတဲ့၊ထိုအခါအတွင်းရေးမှူးကအရမ်းစိတ်ဆိုးပြီး “ ဒီကုလားတွေကိုတလုံးမှမပေးနဲ့၊ခါတိုင်းငါတို့အလှူငွေ၊ရန်ပုံငွေသွါးကောက်ရင်တရုတ်တွေကမနှမျောဘူး၊ဒီကုလားတွေကငွေမရှိဘူးဆိုပြီးဘယ်တော့မှမထည့်ကြဘူး၊ခုမှအကျိုးရှိတာဆိုငွေပေါ်လာပြီ ” အတွင်းရေမှူးကဒေသခံတိုင်းရင်းသားဆိုတော့စကားကိုတည့်တိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောတတ်သည်၊နောက်ဆုံးတော့လည်းတရားမျှတစွာနဲ့မဲနှိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပိပြား အစိုးရက ဗမာ ကိုမြန်မာလို့ပြောင်းလိုက်ပြီး၊မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမယ်တဲ့၊ပြီးတော့လွှမ်းလဲမလွှမ်းဘူး။မြန်ရမယ်မာရမယ်ဆိုပြီးခုတော့ပျော့စိစိ၊နှေးသုတ်သုတ်။ကျနော်တို့ခေတ်တုံးကလို ဘထွေးတရုတ်တွေကလာခစားရတဲ့ဗမာပြည်၊စင်ကာပူကဆရာလာသင်ရတဲ့ဗမာပြည်၊ယိုးဒယားလိုဖာနိုင်ငံသို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချတဲ့ဗမာပြည်၊ဆန်အများဆုံး export လုပ်တဲ့ဗမာပြည်။ထို့ကြောင်ကျနော်ဗမာ Burma ဘဲသုံးလေ့ရှိတယ်
ကြောင်ဖြူကြောင်နက်ကြွက်ဖမ်းနိုင်ရင် The best !
ခုတလောရွာထဲ “လူမျိုးရေး” သိပ် Hot နေလို့ကျနော်လည်းဝင်နှောက်လိုက်တာပါဗျာ။
တရုပ်ဝန်ထမ်းတွေကလာဘ်တော့်သေးသေးမစားပါဘူး ဓားပြပဲတိုက်တာ မူဆယ်-ကျယ်ဂေါင်ခြံစည်းရိုးမှာ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်တွေ ကယ်ရိံကလာပို့တုံးအဖမ်းခံရတုံးက သူတို့စခန်းကိုခေါ်သွားပြိံးမတန်တဆဈေးနဲဝယ်တယ်လေ ဝတ်နည်းလွတ်ပေါ့။နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့်ရှိတာပဲ ခင်ဗျားပြောတဲ့ တရုပ်ပြည်ကပိုဆိုးလို့သေဒဏ်လို့သတ်မှတ်ထားတာ။
“ ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်၊လက်တွဲဆက်ဆက်ခေါ် ”ဆိုတဲ့သီချင်းရှိခဲ့သည်၊ဆွေမျိုးဆိုတာဗမာ၊ပေါက်ဖေါ်ဆိုတာတရုတ်၊အဲဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆိုရှယ်လစ်စနစ်အောက်မှာအကြာကြီးနေခဲ့သည်၊အဲဒီတော့ဒီပုပ်ထဲကဒီပဲမြွေမြွေခြင်းခြေမြင်သည်။
ဗိုလ်ရှုမောင်တို့ခေတ်တွင်၊ကျနော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ကနေမန္တလေးကိုသွားလာနေတဲ့မီးရထားသည် ဝက်လက် မြို့ကိုများသောအားဖြင့်ညဉ့်နက်အချိန်မှာဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်၊ဒီ ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီများသည်ရထားများ(အစုန်နှင့်အဆန်)ကိုရပ်တန့်စေပြီး၊လေထိုးဓါတ်မီး (Gas lamp)များဆယ်ခုထက်မနည်းလင်းထိန်အောင်ထွန်းထားပြီး၊နိုင်ငံတော်၏အကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရထားပေါ်တက်၍ပိုက်စေ့တိုက်ရှာဖွေလေ့ရှိသည်၊ဥပမာသူတို့သုံးဆွဲနေသောလေထိုးဓါတ်မီးများဟာသူတို့ရှာဖွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သောသူတို့၏အမဲဖြစ်သည့်မှောင်ခိုပစ္စည်းများစွားထဲမှတခုဖြစ်သည်။အကယ်၍သာကျောက်စိမ်းသူဌေး Boss ဖြစ်တဲ့ ဆရာ eveningstar ရဲ့လက်ကောက်လေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ရင်မတန်တဆဈေနဲ့တော့ဝယ်လိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူး၊နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအတွက်လှူရမလား၊ကောင်စီလူကြီးများ၏အိတ်ထဲလှူရမလားခန့်မှန်းရခက်သည်။
ခင်ဗျားကျနော့ post မှာလာ comment သည်ကိုတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် inter net ပေါ်တယောက်နှင့်တယောက်နှေက်လိုက်၊တို့လိုက်၊ဆွလိုက်၊စကားနာထိုးလိုက်နှင့်အချင်းချင်းပျော်နေကြသည်မဟုတ်ဘူးလား ?
တကယ်ပြောတာလား ? မနှောက်နဲ့နော်။
အရေးယူမယ်ဆို လ ဝ က တွေကိုအရင်ဆော်၊ဒီကောင်တွေကြောင့်ငါတို့တရုတ်တွေဗမာပြည်ကြီးထဲအများကြီးရောက်လာတာ။
ဟုတ်ပါတယ်။မကြာမီ တကယ်ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကြတော့မှာပါ။အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးပြီးနေပီ။
ြိကိုဆိုပါတယ် …. တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေ့ါ ………. …… လာဘ်စားတဲ့ လူတွေကိုလည်း ထိထိ ရောက်ရောက် အပြစ်ပေးနိုင်ရင် ပိုထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ် ။